အပြာရောင် ဦး ထုပ်ဒီဇိုင်းသည် Atlanta ရှိ 12Stone ဘုရားကျောင်းရှိ FUJINON HD မျက်ကပ်မှန်များကိုပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အတ္တလန်တာအတွက် 12Stone ဘုရားကျောင်းမှာအပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းသွင်းယူမှုများ FUJINON HD ကိုမှန်ဘီလူး
အတ္တလန်တာအတွက် 12Stone ဘုရားကျောင်းမှာအပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းသွင်းယူမှုများ FUJINON HD ကိုမှန်ဘီလူး
12Stone ဘုရားကျောင်းယခု FUJINON မျက်ကပ်မှန်ပေါ်၎င်း၏လေးအတ္တလန်တာကျောင်းခွဲမှာဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှု bases
ဝိန်း, NJ - America မှာအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာအသင်းတော်များတစုံတပါးကဲ့သို့, 12Stone ဘုရားကျောင်းမကြာသေးမီက State-Of-The-Art တပ်ဆင်ထားသော Sugarloaf ကိုခေါ်သစ်တစ်ခုအတ္တလန်တာမက်ထရိုကျောင်းဝင်း, ဖွင့်လှစ် HD ဗီဒီယိုနှင့်မြက်ချိုင့် LDX80 Premiere ကင်မရာများနှင့် FUJINON နှင့်အတူပြည့်စုံအသံထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ HD ၏ Optical ဖုန်းများအတွက် Division မှမျက်ကပ်မှန် Fujifilm မြောက်အမေရိကကော်ပိုရေးရှင်း။ မှန်ဘီလူးအထုပ်ပါဝင်သည်: နှစ်ခု FUJINON XA22X7 စတူဒီယိုစီးရီး box ကိုမျက်ကပ်မှန် အောက်ခံ-တပ်ဆင်ထားကင်မရာများနှင့်နှစ်ခုကို FUJINON ZA12X4.5 အပေါ် ENG မှန်ဘီလူး လက်ကိုင် application များအတွက်။
ဤတရားလေးပါးနေရာများမှာ 12Stone-တစ် Wesleyan ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန် 20 ကျော်တက်ရောက်ရန်အပတ်စဉ် 30,000 ကိုးကှယျမှုန်ဆောင်မှုဘုရားကျောင်း-ပေးထားပါတယ်။ အသစ် 1,000-ထိုင်ခုံ Sugarloaf ကိုးကှယျမှုစင်တာ 2,600 ထိုင်ခုံနဲ့ 800-ထိုင်ခုံကိုးကှယျမှုစင်တာနှင့် Flowery ဌာနခွဲနှင့်အတူ Hamilton ကစက်ကျောင်းဝင်း၎င်း၏ 500 ထိုင်ခုံကိုးကွယ်ခြင်းစင်တာနှင့်အတူ (Lawrenceville, ဂျော်ဂျီယာအတွက်) ဗဟိုကျောင်းဝင်းအပါအဝင်သုံးအခြားဒေသတွင်းနေရာများ, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ 12Stone လည်းယင်း၏မှာ select လုပ်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို webcasts က်ဘ်ဆိုက်.
"12Stone ဘုရားကျောင်းဟာမှန်ဘီလူးအလွန်ကောင်းစွာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်နေရာတွင်ယင်း၏ဗဟိုကျောင်းဝင်းမှာနှစ်ပေါင်း FUJINON မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမျက်ကပ်မှန်ခြွင်းချက်ထုတ်လုပ်ရန် ရုပ်ပုံအရည်အသွေး, ပင်အလွန်နိမ့်အလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်, သူတို့သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေတဲ့, "ဒါဝိဒျ Roche, နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း၏အိမ်များများအတွက် Audio / Video installation နဲ့ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအထူးပြုတဲ့စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကများအတွက်စီမံကိန်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ် Norcross, ဂျော်ဂျီယာအခြေစိုက်ကိုးကှယျမှု (HOWs) ။ "ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ဖို့အချိန်ရောက်လာသောအခါ, HD အသစ်က Sugarloaf ကျောင်းဝင်းအဘို့အမျက်ကပ်မှန်, ငါတို့ FUJINON နှင့်အတူတည်းခိုအလွန်အဆင်ပြေကြတယ်။ "
2008 မှာတော့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ 12Stone ဘုရားကျောင်းရဲ့ဗဟိုကျောင်းဝင်းအဆင့်မြှင့် HD ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များအပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ခန်း, ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်မှုခန်းနှင့်ပြင်ဆင်ရန်အစုံ-အဖြစ်ပိုကြီးစက်ရုံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့အသံ။ အဓိကကျောင်းဝင်းလည်းပုံရိပ်ချဲ့များအတွက်ထုံးစံပြဇာတ်အလင်းရောင်ဇယားကွက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံကစနစ်, ငါး Christie ကဒစ်ဂျစ်တယ် HD20K projector ကိုနဲ့ကြီးမားတဲ့ On-ဇာတ်စင်ဖန်သားပြင်ပါရှိပါတယ်။
2014 မှာတော့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားတဲ့တပ်ဆင်ရန်ပြန်လာသော HD အသစ်က Sugarloaf ကျောင်းဝင်းမှာဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ။ ဇွန်လအတွက် 2014, အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း 2014StoneChurch ယင်း၏ဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းများအတွက်ဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏အကောင်းဆုံးအိမ်များအတွက် 12 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Integrated အကောင်းဆုံးဆုကို HD ဗီဒီယိုနှင့်အဆိုပါ JohnC.MaxwellLeadershipCenter နှင့်အတူအသံထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ။ တည်ဆောက်ပုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Sugarloaf Wakefield, Beasley & Associates မှ-အိမ်များနှစ်ဦးစလုံး 12Stone ရဲ့ကိုးကှယျမှုစင်တာအဖြစ်ဓမ္မဆရာများနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပီအဘို့အလေ့ကျင့်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသော MaxwellCenter ကအဆောက်အဦးဒီဇိုင်း။
က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ဇယားကွက်, LED အလင်းရောင်ပြား, 3G ဖိုင်ဘာကင်မရာအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ, အသံဆက်သွယ်မှု, သုံး 16 ပေရှည် cyc နံရံများနှင့် 200-အဖွဲ့ဝင်ပရိသတ်အတွက်ထိုင်ခုံနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးအပြည့်အဝရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုရှိပြီးသော Sugarloaf ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအများအပြား Yamaha အသံ Dante ကွန်ရက်သည်ခရစ်ပရိုဂျက်နှင့်လိုင်းကဗီဒီယိုမော်နီတာနှင့် Image display တွေ၏ထိပ်နှင့်အတူ consoles စဖော်စပ်နှစ်ခုမြက်ချိုင့် Karerra 2.5 ME Switcher ရှိပါတယ်။
12Stone ရဲ့ Multi-ကျောင်းဝင်းဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ, ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလေးပါးနေရာများတွင်မဆိုကနေအစပြုတာတရားမှခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုထို့နောက်အားလုံးလေးခုနေရာများတွင်ဆက်သွယ်ဖိုင်ဘာအိုင်ပီကွန်ယက်ကို matrix ကိုကျော်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်ဗီဒီယိုကနေတဆင့်ဖြန့်ဝေခြင်း, ကိုးကွယ်မှုစင်တာများ၏တစ်ဦးချင်းစီမှာဒေသခံပြန်ဖွင့်ဘို့အမြက်ချိုင့် K2 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 3G သို့မဟုတ် K2 တစ်ကိုယ်တော် 3G Elite server များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
"နှစ်တွေ 12StoneChurch FUJINON မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူအလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနေဖြင့်ထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုရှိခဲ့ပါတယ် Fujifilm ဒီ Sugarloaf စီမံကိန်းကိုပေါ်မှာအလွန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေသူအရောင်းကိုယ်စားလှယ် Susan Teuscher, "Roche ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ FUJINON မျက်ကပ်မှန်ကိုကြိုက်ခြင်းနှင့် 12 ဘို့စီစဉ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် 2015StoneChurch ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့ဤအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်စီစဉ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ "
ဒီနှစ်မှာတော့အမှတ်အသားများ FujifilmUS မှာယခင်က FUJINON အဖြစ်လူသိများသည့် Optical ဖုန်းများအတွက်ရတိုင်း, များအတွက် 's 80th နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် 40 နှစ်ပေါင်း
Fujifilm မြောက်အမေရိကကော်ပိုရေးရှင်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းခွဲ Fujifilm Holdings ကအမေရိကားကော်ပိုရေးရှင်းလေးလည်ပတ်မှုကွဲပြားခြင်းနှင့်တဦးတည်းလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Imaging ကဌာနခွဲအပါအဝင်စားသုံးသူများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဓာတ်ပုံပြပွဲထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, ပေးပါသည်: ဓာတ်ပုံစက္ကူ; ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုများနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကိုထွက်ပစ္စည်း, ရုပ်ရှင်; နှင့်တဦးတည်းအချိန်သုံးကင်မရာများ; လည်းရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံ Archive ရုပ်ရှင်နှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းမှ On-set ကိုအရောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ဈေးကှကျ။ အီလက်ထရောနစ် Imaging ကတိုင်းစားသုံးသူဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများဈေးကှကျ, နှင့်ဂရပ်ဖစ်စနစ်တိုင်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြန့်ဖြူး။ အဆိုပါ Optical ဖုန်းများအတွက်ရတိုင်း, အထုတ်လွှင့်မှုအတွက် optical မျက်ကပ်မှန်ကိုထောက်ပံ့ပေးရုပ်ရှင်ပညာ, circuit ကိုရုပ်မြင်သံကြား, ဗီဒီယိုနှင့်စက်မှုစျေးကွက်ပိတ်သိမ်းနှင့်လည်းမှန်ဘီလူးဈေးကှကျ။ Fujifilm ကနေဒါ Inc ၏အကွာအဝေးရောင်းချနှင့်ဈေးကှကျ Fujifilm ကနေဒါထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.fujifilmusa.com/northamerica, ကိုသွား www.twitter.com/fujifilmus လိုက်လျှောက်ရန် Fujifilm Twitter တွင်, ဒါမှမဟုတ်သွားပါ www.facebook.com/FujifilmNorthAmerica လိုပဲရန် Fujifilm ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ။ သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိမှညွှန်ကြား Fujifilm RSS ကိုမှတဆင့်မှာ subscribe www.fujifilmusa.com/rss.
Fujifilm ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ, ဆေးဝါးများနှင့်အလှကုန်နှင့်အတူ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု; Holdings ကကော်ပိုရေးရှင်း, တိုကျို, ဂျပန်အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်မှစဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဦးဆောင်-အစွန်းထွက်ပစ္စည်းများယူဆောင်လာ ဂရပ်ဖစ်စနစ်များ, ထိုကဲ့သို့သောပြားချပ်ချပ် panel ကိုခင်းကျင်းပြသပစ္စည်းများအဖြစ်အလွန်အမင်း functional ဖြစ်စေပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှန်ဘီလူးအဖြစ် optical devices များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်; နှင့်စာရွက်စာတမ်းထုတ်ကုန်။ ဤရွေ့ကားဓာတု, စက်မှု, optical, အီလက်ထရောနစ်, ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများတစ်ကျယ်ပြန့်အစုစုကိုအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ မတ်လ 31, 2014 အဆုံးသတ်နှစ်တွင်, ကုမ္ပဏီဒေါ်လာ 23.7 ယန်းတစ်ဦးလဲလှယ်မှုနှုန်းမှာ $ 103 ဘီလီယံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Fujifilm သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သာသနာတော်ကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောကော်ပိုရိတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှကျူးလွန်နေသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.fujifilmholdings.com.
နည်းပညာပိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထွန်းသစ်စမီဒီယာနည်းပညာကနေပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ယာယီထုတ်လွှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများပေးရန်, ကိုးကွယ်မှုစျေးကွက်မှဖောက်သည်-အာရုံစူးစိုက်ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကယ်တင်တတ်၏။ အဲဒါကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အချိန်ရတဲ့အခါ, သူတို့ရဲ့ clients များပြန်အချိန်လာနှင့်နောက်တဖန်သူတို့၏သီးသန့်ဂျက် Stream စုစုပေါင်းအစီအစဉ်Management®ချဉ်းကပ်၏ "ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစား" ရန်။ အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း 12Stone ဘုရားကျောင်း, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစီးတီးဘုရားကျောင်း, လက်ဝါးကပ်တိုင် Point ဘုရားကျောင်းနှင့် Bellevue နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်တူဝတ်ပြုရေးသြဇာအိမ်များအတွင်းတန်ဖိုးအားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကိုးကွယ်မှုစီမံကိန်း၏အကောင်းဆုံးအိမ်များအတွက် 2014 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Integrated ဆုကို၏အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းရဲ့မကြာသေးခင်ကအနိုင်ရရှိနှင့်အတူ, သူတို့စီမံကိန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဘို့သတိပြုမိနေကြသည်ဟုဂုဏ်ယူကြသည်။ TI အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်း၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီမှကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်တူညီတဲ့အဆင့်ကိုယူလာရန်အပျနှံခဲ့သည်။
TI ၏အပြာရောင်ဟက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www.bluehatonline.com
COVID-19 Daily Press Briefings ကိုရေကူးကန်မှဗီဒီယိုမျှဝေခြင်းအတွက် TVU ကွန်ယက်များအသုံးပြုရန်ကယ်လီဖိုးနီးယားအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများဌာန - စက်တင်ဘာလ 23, 2020
အသံလွှင်း ဘုရားကျောင်းထုတ်လုပ်မှု ENG မှန်ဘီလူး Fujifilm FUJINON ဝတ်ပြုကိုးကွယ်အိမ်များ မျက်ကပ်မှန် အလင်းရောင် optical devices များ စနစ်များကိုပေါင်းစပ် 2014-08-22
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းရဲ့ဗားရှင်း 1.9.3 ကင်မရာဆော့ဝဲ Update ကို
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါဂိမ်း Pixel ကို Magic နှင့်အတူမြင့်ရပ်လိုက်တဲ့အခါ